प्रारम्भिक कक्षालाई परियोजनामा नभई राष्ट्रिय कार्यक्रममै चलाउन सुझाव | Nagarik News - Nepal Republic Media
शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा सोमबार आयोजित ‘प्रारम्भिक कक्षा पढाइः लगानी र उपलब्धि’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रम शिक्षाबारमा शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले भने, ‘परियोजनालाई लामो अवधिमा नलगी राष्ट्रिय प्रणालीमा लैजानु पर्थ्यो । एकपछि अर्काे प्रोजेक्ट आइदियो ।’ उनले प्रोजेक्ट सानो स्केलमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम आइदिएको भए उपलब्धि पनि अहिलेको भन्दा बढी आउँनेथ्यो भने । ‘प्रोजेक्टले नियन्त्रणमुखी वातावरण बनाउँछ ।
यसले उपलब्धिमा असर पार्छ,’ डा. कार्कीको भनाइ छ, ‘शुरुमै प्रोजेक्ट कार्यान्वयन थालिएकाले राष्ट्रिय कार्यक्रमले एउटा र इजिआरपी प्रोजेक्टले अर्काे इन्ट्रेस्ट बोकेर गएको देखियो ।’ डा. कार्कीले मातृभाषामा भन्दा पनि नेपालीमा शुरुदेखि नै गरेको भए मैथिली, भोजपुरीलगायतमा सजिलो पथ्र्याे भने । ‘शुरुदेखि गति नबढ्नु यो पनि एउटा कारण हो,’ उनले भने । प्रारम्भिक कक्षा पढाइमा अझैपनि नेपाल शुरुकै चरणमा रहेको अझ १५ वर्ष यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारकै रेखदेखमा सन् २०१५–२०२० सम्म देशभर १६ जिल्लामा प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम अर्थात् ‘इजिआरपी’ परियोजनाको अवधि सकिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणगरी यही जुलाईभित्र सकिने यस परियोजनाका लागि ६३.८ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । तर, परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा आइपुग्दा प्रतिफल भने उत्साहजनक नभएको डा. कार्कीले बताउनुभयो ।
इजिआरपी युएसआइडीका कार्यक्रम निर्देशक नारायणकृष्ण श्रेष्ठले परियोजनाले नै मोडल बनाउने हो भन्दै प्रोजेक्ट परीक्षणबाट इजिआरपी राष्ट्रिय आवश्यकताको कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । उनले सरकारले मात्र पूर्ण रुपमा प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले भार पर्ने भन्दै सघन कार्यक्रम गरेर नतिजा ल्याउन आफूहरू सक्रिय रहेको प्रष्ट्याउनुुभयो ।
परियोजनालाई संक्रमणकालीन रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि दुई वर्ष थप्न सरकार र दातृ समुदाय निर्णयमा पुगिसकेका छन् । शिक्षण सामग्रीयुक्त शिक्षक, सिकाइ तथा घरमा पढ्ने वातावरण, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र अभिभावकले छोराछोरीका पढाइका लागि दिने समयलाई आधार मानी इजिआरपी सञ्चालन गर्न लागिएको हो । इजिआरपीसम्बन्धी दस्तावेज लेखनमै संलग्न डा. कार्कीको टिप्पणी छ, ‘यहाँसम्म त ठिकै छ । मैलेचाहिँ पाँच वर्ष थपौं र नौवटा कम्पोनेन्टमा तलका कक्षाको पढाइ सुधारौं भनेको हुँ ।’
प्रकाशित: २९ असार २०७७ २२:३२ सोमबार
प्रारम्भिक कक्षा नेपाली मातृभाषी